सेक्सगर्दा यस्ता कुरा कहिल्यै नविर्सनु - Nepal's Online News
सेक्सगर्दा यस्ता कुरा कहिल्यै नविर्सनु
सेक्स सुन्दा सहज तर यसलाई दाम्पत्य जीवनलाई महत्वपूर्ण बनाउनका लागि हामीले गहन रुपमा लिन सक्नु पर्दछ । सेक्समा गरिने हेलच्यक्राइ तथा लापरवाहीले शारीरिक रुपमा असर मात्र गर्ने होइन मानिसिक तथा पारिवारिक बेमेल समेत हुन सक्दछ । सेक्स गर्दा महिला तथा पुरुष दुबैले रमाइलो अनि आनन्द महशुस हुन अनिवार्य छ । दुवैको उत्तिकै सक्रियताबाट मात्र त्यो आनन्द मिल्छ । यस कुरामा ध्यान दिँदै बलजफत होइन दुबैको रोमाञ्चकतामा सेक्स गर्दा फाइदा पुग्दछ ।
एक आपसमा धैर्यता अपनाएर सेक्स गर्नु उचित हुन्छ । हडबड र हेलच्याक्राई पुर्ण सेक्सले पाट्नरलाई पिडा हुन सक्छ । पार्टनरलाई उत्तेजित बनाउने भुमिका हुनुपर्छ । यसकोलागि ओरल सेक्स, बडी मसाज लगायत गतिविधि गर्न सक्नु हुन्छ । यसका धेरै तरिका छन् ।
पार्टनरको चाहना ख्याल राखेर सेक्स गर्नु राम्रो हो । आफ्नो पार्टनरले के चाहान्छ, के चाहँदैन भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी हुन्छ । नवविवाहित जोडीलाई सबैभन्दा अप्ठेरो पर्ने कुरा नै यही हो । आजभोली विहे अघि नै धेरैजसोको चिनजान र धेरैपटक भेटघाट भैसकेको हुन्छ । यस्तोबेला एकअर्काको भावना साटासाट त हुन्छ । तर, बेडरुममा अर्थात् सेक्स गर्ने बेला के मन पर्छ के मन पर्दैन भन्ने कुरा बुझ्नु अत्यत्न जरुरी हुन्छ । यसको लागि सेक्स गर्नुअघि आफ्नो पार्टनरसँग सेक्सको बारेमा खुलेर कुराकानी गर्न सकिन्छ । यदि पार्टनरले सेक्सको बारेमा खुलेर कुरा गरेमा निश्चितरुपमा पहिलो पटकको सेक्सको राम्रोसँग मजा लिन सक्छन् ।
कुनै पुरुष लाजले वा तनावले उत्तेजित नहुन सक्छ । यस्तो कुरामा ध्यान दिएर सेक्सपूर्णका क्रियाकलाप गरिनु पर्दछ । कोही सेक्स गर्नु अघि नै स्खलित हुन सक्छ । कतिपयलाई एलर्जीको देखिन सक्छ । यसो भएमा नआत्तिनुस् । बरु धैर्यपूर्वक काम गर्नुपर्छ । कैयौं पुरुषमा सेक्स समस्याको कारण आत्मविश्वास डगमगाउने गर्छ । यी सबै हुनु सामान्य कुरा हुन् । यसलाई समाधान गर्ने तिर लाग्नु बुद्धिमता हुन्छ ।
सेक्समा कोही पनि उत्कृष्ट हुँदैन । नियमित रुपमा सेक्स गर्दै जाँदा अनुभव हुँदै जान्छ र राम्रो सेक्स जीवन बन्छ । एक आपसको सल्लाह- सुझाव तथा एकअर्का बिचको भलाकुसारीले सेक्स जीवन पूर्ण हुन्छ । सधै यादगार बन्छ ।
सेक्स गरिसकेपछि तपाईं आफ्नो पार्टनरसँगै रहनु पर्दछ । कुराकानी गरेर रहन सक्नु हुन्छ । जस्तो कि सेक्सको अनुभव कस्तो भयो ? सेक्सको बेला के कमी लाग्यो ? आदि आदि । एक पटकको सेक्स नै अन्तिम नहुने बातावरण बनाउन सक्नु पर्दछ ।–एजेन्सी